DHAGAYSO: Sheeko Cusub oo la magac baxday Kurbo Caashaq ‘Qeybtii Koobaad” | Calafka.net	Friday, April 25th, 2014	Home
DHAGAYSO: Sheeko Cusub oo la magac baxday Kurbo Caashaq ‘Qeybtii Koobaad”
Oct 2, 2012 - 3 Jawaabood	ShareWarbaahinta Calafka.net ayaa maanta waxaa ay bilaabaysaa Sheeko tixane ah oo cusub taas oo todobaadkiiba mar aad kala socon doontaan.
Sheekadan ayaa waxaa ay tahay sheeko JAceyl ah, waxaana jilaya qaar kamid ah Shaqaalaha Warbaahinta Calafka.net, waxaana aad dhagaysan doontaan maalin kasta oo Talaado ah Insha Allah
Riix Halkan si aad udhagaysato Qeybtii Koobaad ee Sheekadda
Mahamed mo'allimow says:	October 3, 2012 at 11:10 am	Asc marka hore bahda calafka.net waad slmn thin salaanta islamka asww salan kadib waad ku mhdsn thn dadaalka iyo kaalinta aad inoo heysaan dhanka madaadaalada iyo shekoyinka inta kadib waxan idin leeyahay bahda calafka.net ha ka daalina barnamijyada xiisaha leh gaar ahaan kuwa jclka waxana idin leeyahay hambalyo hambalyo waad ku mhdsn thn qormada shekooyinka xiisaha bdn mhdsndin mhdsndin bahda calafka.net wcs ww allow nagu deeq nbd iyo cfmd dhamaanteen
Reply »	naf jaceel ladhiban says:	October 4, 2012 at 3:34 pm	Asc kadib waxan ahay ruux. Jaceel dashaday hadana ku tixan web iyo shekooyinka. Xisaha le e usoqoro waxan jeclan laha sheka kasta inanlasocdo bilaw ilaa dhamaad. Waxaan ahay ruux shaqeeya wax kabadan 14saac malintii. Hadana waxan isku daya inan wax badan kala socdo calaka .net. Run tii waxaan cdsan laha sheekadan dhagay siga ah. Ma awoodo inaan dhagesto. Sidaa darted waxan. Jeclan laha iyada oo qoraal ah ah inaan ku soo dartaan si an nan uga hab samin aq rinta sheko an isleeyahay. Way xisa badan tahay waxaan idin layahay mahad snidiin. Waa rajay nayaa inad qadari don tan cod sigayga. Xu shmada ku dheehan taahay mar kale mahad sini din
Reply »	Hodan-122 says:	December 10, 2012 at 7:17 pm	Asc bahda calafka.net sln kadib wad mahad santihin shegoyinka ad nowadan balse waxan codsana inad ku dardan qoral ahan sheegada mahad sanidin calafka.net